Arolozan'ny fifamoivoizana - Inona no hatao | Hery - Tsiky dia ampy |
Arolozan'ny fifamoivoizana - Inona no hatao
2016-04-29 @ 19:31 in Fiaraha-monina
Vao hitako nanoratra atsy ambadika atsy i Jentilisa mikasika ny mety hatao mikasika ity lozam-pifamoivoizana mitranga matetika ao Madagasikara ity. Tohina mihitsy moa ny fo tamin'ny zavatra niseho androany fa toa efa halohalika ny ranom-bary. Tsy afaka hiandry fanjakana isika, be izay efa tsy nataony izay koa samia mitady hevitra hiarovana ny aina. Sosokevitra iray izay ampiharin'ny olona amin'ny firenena sasany no arosoko. Fehezina amin'ny hoe "ny mpandeha" (ny mpanjifa) no tokony ho tompom-pahefana.
Ny mpandeha dia mandoa vola fa tsy entina maimaim-poana. Ary efa vidina lafo mihitsy ny fitaterana amin'izao fotoana izao raha miohatra amin'ny fidiram-bolan'ny tsirairay. Koa tahaka ny varotra rehetra dia izay tsara sy hitanao mahasoa no vidina. Inona no mifandrindra amin'izany resaka tolotra sy tinady izany eo amin'ny fitaterana:
- Anontaniana mialoha ilay mpamily raha handeha mafy izy na tsia, indrindra ho an'ny taxi-brousse mandeha lavitra. Azavaina aminy mihitsy fa raha handeha mafy izy dia aleo hifidy taxi-brousse iray hafa izay vonona hanaja lalàna. Tokony ho azo atao izany satria ifandrotehana ny mpandeha rehefa eo amin'ny Stationnement.
- Raha vao manomboka mandeha mafimafy mihoatra ny tokony ho izy ny mpamily dia tenenina avy hatrany. Afaka mangataka ny hijanona mihitsy na miantso zandary amin'ny antso an-taroby. Fa tsy hoe faly rehefa mandeha mafimafy ny mpamily.
- Tsy avelavela fotsiny amin'izao raha nisy ny tsy fanarahan-dalàna teny an-dalana (mpamily nandeha mafy sns) fa resahina avy hatrany amin'ny mpitandro filaminana rehefa tonga.
- Ampitampitaina amin'ny hafa amin'ny fomba samihafa (groupe F.E.M eo amin'ny facebook na fitaovana hafa) ireo fiara, mpamily, kaoperativa izay tsy manara-dalàna toy ny mpamily mifoka sigara, mandeha mafy, sns.
Inoako fa raha samy mandray ny andraikiny ny mpandeha tsirairay dia mety hisy ihany ny aina ho voavonjy. Dia andao hiara-mitady vahaolana mandra-pahatongan'ny fitondrana saina.